मुक्तिनाथ २०% हकप्रदका लागि बोर्ड पुग्यो, इक्राबाट ग्रेड थ्रीको रेटिङ Bizshala -
मुक्तिनाथ २०% हकप्रदका लागि बोर्ड पुग्यो, इक्राबाट ग्रेड थ्रीको रेटिङ
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले जारी गर्न लागेको हकप्रद सेयरलाई इक्रा नेपालले ‘आइपीओ ग्रेड थ्री’को रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
बैंकले रु. ६१ करोड २९ लाख ५२ हजार २५ कित्ता हकप्रदलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले औसत आधारहरु जनाउने इक्रा एनपी आइपीओ ग्रेड थ्रीको रेटिङ प्रदान गरेको हो ।
इक्राले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ, जसमा ग्रेड १ ले बलियो आधारहरु जनाउँछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधारहरु जनाउँछ । ग्रेड २, ३ र ४ मा प्रयोग गरिने प्लस चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउँछ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले १८.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणपछि कायम चुक्तापूँजीको २० प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने योजना बनाएको छ ।
यो बैंकले जेठ २१ गते १ः०.२ को अनुपात(२० प्रतिशत) हकप्रद सेयर निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ६१ लाख २९ हजार ५२०.२५ कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गर्नेछ ।
हकप्रदको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटल लिमीटेड रहेको छ ।
काठमाण्डौ । कोरोना संकटका बीच नियामकीय व्यवस्थाका कारण ठूलो रकम...
बैंक अफ काठमाण्डूले १०%सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, नाफा २२.२१%ले
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि...
लकडाउनपछि कर्जा सूचनाकेन्द्रको कालोसूचिमा पर्ने ऋणिको
काठमाण्डौ । कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले...
मंगलबार प्रभू बैंकको मुख्य शाखा किन बन्द भयो ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ...